စက်ဘီးစီး | October 2021
အဓိက > စက်ဘီးစီး
သက်သတ်လွတ်ဆိုင်ကယ်သမား - ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
စက်ဘီးစီးလိုလားသူသည်သက်သတ်လွတ်လား။ သက်သတ်လွတ်အားကစားသမားတက်လာခြင်းအခြားသက်သတ်လွတ်စက်ဘီးစီးသူများသည် Adam Hansen (Lotto Soudal)၊ Christine Vardaros (Stevens Pro Cycling)၊ Catherine Johnson (Elite CX ချန်ပီယံ) နှင့် Paralympian David Smith MBE တို့ဖြစ်သည်။
စက်ဘီးစီးသူများ - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
အမျိုးမျိုးသောစက်ဘီးစီးသူများဘာတွေလဲ။ အမျိုးမျိုးသောစက်ဘီးစီးသူများကားအဘယ်နည်း Climbers.Sprinters.Riders.Punchers.All-rounders.28 ။ 2018 ။
Cyclist sex - ပြည့်စုံသောရည်ညွှန်းချက်
စက်ဘီးစီးသူများအိပ်ယာထဲနေသလား စက်ဘီးစီးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ချဉ်းကပ်နေသောလူလတ်ပိုင်းအရွယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပြtheနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်အေရိုးဗစ်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လူများစွာအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်စေသည်ဟုပြသသောသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
အပြေးသမားခြေထောက် vs စက်ဘီးစီးခြေထောက်
စက်ဘီးသမားခြေထောက်များနှင့်အပြေးသမားများခြေထောက်များ - မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
သင်၏ခြေထောက်များအပြေးသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးရန်အဘယ်အရာပိုကောင်းသနည်း။ ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းစက်ဘီးစီးခြင်းကသင့်ရဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်တွင်ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ အပြေးသည်အမြောက်အများဆီသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားသန်မာသော၊ စက်ဘီးစီးနေစဉ်ခြေနင်းကိုတွန်းခြင်းသည်ခြေထောက်ကြွက်သားများကိုတည်ဆောက်သည့်ခုခံသင်တန်းဖြစ်သည်။
စက်ဘီးစီး greg - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Greg LeMond ရဲ့နောက်ကျောကဘာလဲ? သူသည်နောက်ကျောတွင်ချုံ့သောကျိုးပဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရသည်။ သူကနေအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူစေရန်မျှော်လင့်ရသည်။ သူသည်ဆေးရုံတက်နေရသည့်တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏နောက်ကျောနာကျင်မှု ကလွဲ၍ အခြားသူလည်းကောင်းသောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်ဟု Kathy LeMond ကပြောသည်။
စက်ဘီးစီးအမျိုးသမီး - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေ
Kristin armstrong စက်ဘီးစီးသူ - ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေပါ
စက်ဘီးစီးသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာရမလဲ - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
စက်ဘီးစီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ဤအစီအစဉ်ကိုဖြတ်သန်းရန်အလွန်ခက်ခဲသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီး Miller က 'မြင်းစီးသူရဲကိုလူကြိုက်များတဲ့ခရီးစဉ်မြင်းစီးသူရဲအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့ ၇ နှစ်လိုတယ်။ '
စက်ဘီးစီးသူများသည်ကားများထက် ဦး စားထားပါသလား။ လမ်းဆုံ၌ဖြောင့်ရှေ့ကိုသွားသည့်အခါစက်ဘီးစီးအခြားမော်တော်ယာဉ်များထက်ရှိသည် ဦး စားပေးရှင်းလင်းပါ။ မျှဝေအသုံးပြုသည့်လမ်းကြောင်းကိုစီးနင်း။ လမ်းလျှောက်သူများကို ဦး စားပေးသည့်အခါစက်ဘီးစီးသူများ၏အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ပေးပါ။ စက်ဘီးစီးသူများသည်လမ်းတစ်လမ်းသို့မဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ဖြတ်ကူးရန်စောင့်နေသောလမ်းလျှောက်သူများကိုလမ်းခင်းပေးရန်အကြံပြုသည်။ 2020 ။
နှင့် Martin Cyclist
ဒန်မာတင်စက်ဘီးစီး - ကြာရှည်ခံဖြေရှင်းချက်
အချိန်တိုင်းတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးစက်ဘီးစီးသူ - လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများ
တစ်ချိန်ကအကြီးမြတ်ဆုံးစက်ဘီးစီးသူကားမည်သူနည်း။ Eddy Merckx
စက်ဘီးစီးသူအာမခံ - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေပါ
စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အာမခံလိုအပ်ပါသလား။ စက်ဘီးစီးသူများသည်အာမခံ ၀ ယ်ယူရန်တရားဝင်မလိုအပ်သော်လည်းမူဝါဒများရှိသည်။ လူကြိုက်များသောအာမခံအဝါရောင်ဂျာစီ, Cycle Guard နှင့် PedalSure တို့ပါဝင်သည်။ မူဝါဒအများစုတွင် Third Party အဖုံးပါဝင်သော်လည်းအများစုသည်စက်ဘီးစီးသူများနှင့်သူတို့၏ပစ္စည်းများကိုဖုံးအုပ်ရန်အဓိကထားကြသည်။
David Millar စက်ဘီးစီး
David Millar စက်ဘီးစီးသူ - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
David Miller ဘယ်မှာနေလဲ? Girona, စပိန်
ပြိုင်ဘက်ဆိုင်ကယ်သမားများ - မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်း
ပြိုင်ဆိုင်မှုစက်ဘီးစီးရောင်းအားရှိပါသလား နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရောင်းသည့်စျေး ၀ ယ်ခြင်း။ | ယှဉ်ပြိုင်ဆိုင်ကယ်သမား။
စက်ဘီးစီးသူဟောင်း - ပြissuesနာများကိုတုံ့ပြန်ခြင်း
အသက်အကြီးဆုံးစက်ဘီးစီးသူကဘယ်သူလဲ။ Robert Marchand
ပြင်သစ်စက်ဘီးစီးသူများ - ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
ဘယ်သူကကျော်ကြားတဲ့ပြင်သစ်စက်ဘီးစီးလဲ။ ၁။ Jacques Anquetil (၁၉၃၄ မှ ၁၉၈၇) HPI ၇၃.၁၃ နှင့် Jacques Anquetil သည်ကျော်ကြားသောပြင်သစ်ဆိုင်ကယ်သမားဖြစ်သည်။
စက်ဘီးစီးသူ Emoji - ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲ
Emoji ဆိုင်ကယ်ရှိပါသလား လူစက်ဘီးစီးခြင်းအပန်းဖြေခြင်း၊ အားကစားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စက်ဘီးစီးသူတစ် ဦး ။ Person Biking ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Bicyclist အမည်အောက်တွင်ယူနီဆက် ၆.၀ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Emoji 1.0 သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Tour de France လေယာဉ်ပျက်ကျတာဘယ်သူလဲ။ ဒါပေမယ့် Tour အောင်မြင်ဖို့အတွက်မြင်းစီးသူရဲတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလေးစားပါ။ ကြည့်ရှုသူများ၏နိမိတ်လက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောလေယာဉ်ပျက်ကျမှုသည်အဖွင့်နေ့၏ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ ဂျာမန်စက်ဘီးစီးသူ Jasha Suetterlin သည်တိုက်ပွဲအပြီးတွင်ပထမဆုံးထွက်ခွာသွားသူဖြစ်ပြီးဒုတိယမတော်တဆမှုမှာအခြားသူများကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်။ 2021 ။
စက်ဘီးစီးနေသောနှလုံးရောဂါ - လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများ
စက်ဘီးစီးခြင်းသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်စေနိုင်သလော။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများတွင်လေဖြတ်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါတို့ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်စက်ဘီးစီးခြင်းကသင်၏နှလုံး၊ အဆုတ်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းကသင်၏နှလုံးကြွက်သားများကိုအားကောင်းစေသည်။
Pantani စက်ဘီးစီးသူ - အဖြေတစ်ခု
Marco Pantani ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ အင်္ဂါနေ့ညတွင်အီတလီ၌ထုတ်လွှင့်မည့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သည်လူကြိုက်များသောစက်ဘီးစီးသူ Marco Pantani သေဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်။ Pantani သည် ၁၉၉၈ Tour de France တွင်အနိုင်ရသူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်သူ၏ဟိုတယ်အခန်းတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီးနောက်အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။